သင်ကိုယ်တိုင်တောင်မသိပဲ သင့်ဘ၀သင် ဖျက်ဆီးနေမိနေပြီလား 💌 – Trend.com.mm
သင်ကိုယ်တိုင်တောင်မသိပဲ သင့်ဘ၀သင် ဖျက်ဆီးနေမိနေပြီလား 💌
ဘ၀ဆိုတာ ပန်းခင်းလမ်းလိုချောချောမွေ့မွေ့မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာ အားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်! ဒီလိုမလွယ်လှတဲ့ဘ၀ရေစီးကြောင်းထဲလိုက်ပါနေရင်း ကိုယ်တိုင်တောင်မသိပဲ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်ဖျက်ဆီးနေမိတာတွေ၊ကိုယ့်စိတ်ကိုလှောင်ပိတ်မိနေတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။သင်ကိုယ်တိုင်တောင်မသိပဲနဲ့ပေါ့။
သင့်ဘ၀မှာ သင်တကယ်မခင်ချင်တဲ့သူ၊မပေါင်းသင်းချင်တဲ့သူ၊စကားတောင်မပြောချင်တဲ့သူတွေအတွက် အချိန်ပေးနေရပြီလား?အလုပ်ကိစ္စနဲ့မဟုတ်ပဲကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင့်စိတ်ထဲက စိတ်လိုလက်ရခင်ချင်တဲ့သူ၊စကားပြောချင်တဲ့သူမဟုတ်ပဲ စကားတွေပြောနေရတာတွေ၊ချိန်းရင် သွားမတွေ့ချင်ပဲနဲ့သွားတွေ့နေရတာတွေရှိနေပြီလား? ဒီလိုကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကို အားနာပါးနာနဲ့ လိုက်လုပ်နေရတာတွေက စိတ်ကိုတကယ်မွန်းကျပ်စေပါတယ်။သင် ကိုယ်တိုင်လည်းသိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ အားနာတာတွေ၊သွားမတွေ့ရင်မကောင်းပါဘူးလေဆိုတာတွေနဲ့ သင့်စိတ်ကိုသင်မွန်းကျပ်အောင်လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။သင့်စိတ်အလိုအတိုင်းပဲ လိုက်နာနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပါပဲ။မလိုအပ်တာတွေအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိနေတာကိုက သင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုးဝါးအောင်လုပ်မိနေတာပါ။
အတိတ်တုန်းကဖြစ်ရပ်တွေ၊ခံစားချက်တွေက အခုလက်ရှိအချိန်ထိခေါင်းထဲမှာရှိနေတုန်းလား၊နာကျင်နေတုန်းလား၊ခံစားနေရတုန်းလား? Let it Go ….အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ လက်ရှိအချိန်ကိုယူလာနေဦးမှာလဲ။အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားပစ်ခဲ့ပါတော့။မကောင်းတဲ့အရာတွေ၊မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေ၊အဆိုးမြင်စိတ်တွေကို လက်ရှိအချိန်ထိသယ်ဆောင်လာနေမယ်ဆိုရင် ဒါက သင့်ဘ၀သင်ဖျက်ဆီးနေတာပါပဲ။အတိတ်တုန်းက အချစ်ရေးမှာသစ္စာဖောက်ခံခဲ့ရလို့ အားလုံးကို
အဆိုးမြင်နေမယ်ဆိုရင် တကယ်ကောင်းမွန်တာကို သင်မြင်တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။လွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလက်မလွှတ်မိပါစေနဲ့။
တစ်ခြားသူတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်နှိုင်းယှဉ်မိနေတာကလည်း ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်ဖျက်ဆီးနေမိတာပါပဲနော်။ ဖေ့ဘွတ်ခ်၊အင်စတာဂရမ်မှာဖောလိုးဝါးများတာနည်းတာကသင့်ရဲ့ လက်ရှိဘ၀တန်ဖိုးကို တိုးမလာစေသလို လျော့လည်းလျော့မသွားစေပါဘူး။ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာငွေနည်းနေတာကလည်း သင့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေ၊သင့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးကောင်းတွေကိုမလွှမ်းမိုးမဖျက်ဆီးနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ့်ထက် သူများက ဘယ်လောက်ပဲသာနေပါစေ၊သူများတွေမှာဘယ်လောက်ပဲငွေကြေးကြွယ်ဝနေပါစေ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် ဘယ်တေ့ာမှတစ်ခြားသူတွေနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ကိုယ့်ထက်ကြွယ်ဝတဲ့သူနဲ့နှိုင်းယှဉ်စရာမလိုသလို ကိုယ့်ထက်ငွေကြေးနွမ်းပါးသူနဲ့လည်း နှိုင်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။သင်လုပ်ရမှာက ဒီနေ့သင်နဲ့ နောက်နေ့ သင်ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာသလဲဆိုတာနှိုင်းယှဉ်ဖို့ပါပဲ။
သင့်ကိုယ်သင်အမှန်အတိုင်းချပြရမှာကို ကြောက်နေတာကလည်း မလိုအပ်ပဲ သင့်ဘ၀ကို သင်ဖျက်ဆီးနေမိတာပါပဲ။သင်မှမဟုတ်ပါဘူး။တော်တော်များများကကိုယ့်ဘက်က နက်နက်နဲနဲခံစားနေရတာကို ချပြလိုက်တဲ့အခါ လှောင်ရယ်ခံရမှာကိုကြောက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်အမှန်ထက် တစ်ဝက်လောက်နီးပါးကိုသာ ထုတ်ပြောတတ်ကြပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေဆိုထုတ်တောင်မပြောကြပါဘူး။အဲ့ဒီလိုကြောက်စိတ်တွေကြောင့် သင့်ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးလူတွေကိုတောင် သင့်ရဲ့ခံစားချက်အမှန်ကိုမပြောလိုက်ရပဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ သင့်အမေကိုချစ်တယ်ပြောဖို့လည်းမရှက်ပါနဲ့။အမေကိုချစ်တယ်ဆိုတာ နှုတ်ကပြောစရာမလိုတဲ့အမှန်တရားဆိုပေမဲ့လည်း ပြောပါ။သင့်ဘက်က သူတို့အပေါ်ချစ်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်သလောက်ဖော်ပြပါ။
ဒီလိုပဲ အဖေ့အပေါ်၊သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်၊ချစ်သူအပေါ် ချစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲကသိပေမဲ့လည်း ချစ်ကြောင်းပြောပါ။ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုချစ်တယ်လို့ပြောရတာလောက် ပျော်စရာကောင်းပြီးကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိပါဘူး။
သင့်ရဲ့ မသိစိတ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိတာကလည်း သင်ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့အမှားတစ်ခုပါပဲ။တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်စိတ်ထဲက ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့တစ်ချို့သောအကြောင်းအရာတွေကြောင့် မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး။တကယ်တမ်းလုပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အရာက ကိုယ့်စိတ်ထဲကစဉ်းစားမိခဲ့တာလောက်မကောင်းဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ မသိစိတ်အပေါ်အယုံအကြည်ကင်းမဲ့တာကလည်း မလိုလားအပ်တဲ့နောင်တတွေဖြစ်စေပါတယ်။ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလုပ်လိုက်မိလို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေက ကိုယ့်အတွက် သင်ခန်းစာတစ်ခုပါပဲ။လုပ်ချင်ရဲ့သားနဲ့ မလုပ်လိုက်မိတဲ့နောင်တတွေရမှာထက်စာရင် သင်ခန်းစာတစ်ခုရတော့ပိုမကောင်းဘူးလား။
သင့်ဘ၀ကို သင်ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ဒီအရာလေးတွေကို သိပြီဆိုရင် သင့်ကိုယ့်သင် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ပြောင်းလဲသင့်တာတွေပြောင်းလဲပြီး ရှေ့ဆက်လျှောက်ပါတော့…🌸
ဘဝဆိုတာ ပနျးခငျးလမျးလိုခြောခြောမှမှေ့မေ့ရှိနိုငျဘူးဆိုတာ အားလုံးသိကွတယျဟုတျ! ဒီလိုမလှယျလှတဲ့ဘဝရစေီးကွောငျးထဲလိုကျပါနရေငျး ကိုယျတိုငျတောငျမသိပဲ ကိုယျ့ဘဝကိုယျဖကျြဆီးနမေိတာတှေ၊ကိုယျ့စိတျကိုလှောငျပိတျမိနတောတှရှေိတတျပါတယျ။သငျကိုယျတိုငျတောငျမသိပဲနဲ့ပေါ့။
သငျ့ဘဝမှာ သငျတကယျမခငျခငျြတဲ့သူ၊မပေါငျးသငျးခငျြတဲ့သူ၊စကားတောငျမပွောခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ အခြိနျပေးနရေပွီလား?အလုပျကိစ်စနဲ့မဟုတျပဲကိုယျရေးကိုယျတာကိစ်စတှနေဲ့ပတျသကျပွီး သငျ့စိတျထဲက စိတျလိုလကျရခငျခငျြတဲ့သူ၊စကားပွောခငျြတဲ့သူမဟုတျပဲ စကားတှပွေောနရေတာတှေ၊ခြိနျးရငျ သှားမတှခေ့ငျြပဲနဲ့သှားတှနေ့ရေတာတှရှေိနပွေီလား? ဒီလိုကိုယျမလုပျခငျြတဲ့ကိစ်စတှကေို အားနာပါးနာနဲ့ လိုကျလုပျနရေတာတှကေ စိတျကိုတကယျမှနျးကပျြစပေါတယျ။သငျ ကိုယျတိုငျလညျးသိမှာပါ။ဒါပမေဲ့ အားနာတာတှေ၊သှားမတှရေ့ငျမကောငျးပါဘူးလဆေိုတာတှနေဲ့ သငျ့စိတျကိုသငျမှနျးကပျြအောငျလုပျဖို့မလိုပါဘူး။သငျ့စိတျအလိုအတိုငျးပဲ လိုကျနာနိုငျရငျ သိပျကောငျးမှာပါပဲ။မလိုအပျတာတှအေတှကျ စိတျဖိစီးမှုတှရှေိနတောကိုက သငျ့ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျပွီးဆိုးဝါးအောငျလုပျမိနတောပါ။
အတိတျတုနျးကဖွဈရပျတှေ၊ခံစားခကျြတှကေ အခုလကျရှိအခြိနျထိခေါငျးထဲမှာရှိနတေုနျးလား၊နာကငျြနတေုနျးလား၊ခံစားနရေတုနျးလား? Let it Go ….အဲ့ဒါတှကေိုဘာလို့ လကျရှိအခြိနျကိုယူလာနဦေးမှာလဲ။အတိတျကိုအတိတျမှာပဲထားပဈခဲ့ပါတော့။မကောငျးတဲ့အရာတှေ၊မကောငျးတဲ့ခံစားခကျြတှေ၊အဆိုးမွငျစိတျတှကေို လကျရှိအခြိနျထိသယျဆောငျလာနမေယျဆိုရငျ ဒါက သငျ့ဘဝသငျဖကျြဆီးနတောပါပဲ။အတိတျတုနျးက အခဈြရေးမှာသစ်စာဖောကျခံခဲ့ရလို့ အားလုံးကို
အဆိုးမွငျနမေယျဆိုရငျ တကယျကောငျးမှနျတာကို သငျမွငျတှနေို့ငျမှာမဟုတျပါဘူးနျော။လှနျခဲ့တဲ့အကွောငျးအရာတှကွေောငျ့ ကောငျးမှနျတဲ့အခှငျ့အလမျးတှကေိုလကျမလှတျမိပါစနေဲ့။
တဈခွားသူတှနေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျနှိုငျးယှဉျမိနတောကလညျး ကိုယျ့ဘဝကိုယျဖကျြဆီးနမေိတာပါပဲနျော။ ဖဘှေ့တျချ၊အငျစတာဂရမျမှာဖောလိုးဝါးမြားတာနညျးတာကသငျ့ရဲ့ လကျရှိဘဝတနျဖိုးကို တိုးမလာစသေလို လြော့လညျးလြော့မသှားစပေါဘူး။ဘဏျအကောငျ့ထဲမှာငှနေညျးနတောကလညျး သငျ့ရဲ့ အိပျမကျတှေ၊သငျ့ရဲ့ ပြျောရှငျမှုတှေ၊သငျ့ရဲ့ စိတျကူးကောငျးတှကေိုမလှမျးမိုးမဖကျြဆီးနိုငျပါဘူး။အဲ့ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ထကျ သူမြားက ဘယျလောကျပဲသာနပေါစေ၊သူမြားတှမှောဘယျလောကျပဲငှကွေေးကွှယျဝနပေါစေ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျ ဘယျတေ့ာမှတဈခွားသူတှနေဲ့မနှိုငျးယှဉျပါနဲ့။ကိုယျ့ထကျကွှယျဝတဲ့သူနဲ့နှိုငျးယှဉျစရာမလိုသလို ကိုယျ့ထကျငှကွေေးနှမျးပါးသူနဲ့လညျး နှိုငျးဖို့မလိုအပျပါဘူး။သငျလုပျရမှာက ဒီနသေ့ငျနဲ့ နောကျနေ့ သငျဘယျလောကျထိတိုးတကျလာသလဲဆိုတာနှိုငျးယှဉျဖို့ပါပဲ။
သငျ့ကိုယျသငျအမှနျအတိုငျးခပြွရမှာကို ကွောကျနတောကလညျး မလိုအပျပဲ သငျ့ဘဝကို သငျဖကျြဆီးနမေိတာပါပဲ။သငျမှမဟုတျပါဘူး။တျောတျောမြားမြားကကိုယျ့ဘကျက နကျနကျနဲနဲခံစားနရေတာကို ခပြွလိုကျတဲ့အခါ လှောငျရယျခံရမှာကိုကွောကျကွပါတယျ။ဒါကွောငျ့ပဲ ကိုယျ့စိတျရဲ့ခံစားခကျြအမှနျထကျ တဈဝကျလောကျနီးပါးကိုသာ ထုတျပွောတတျကွပါတယျ။တဈခါတဈလဆေိုထုတျတောငျမပွောကွပါဘူး။အဲ့ဒီလိုကွောကျစိတျတှကွေောငျ့ သငျ့ဘဝရဲ့ အရေးကွီးဆုံးလူတှကေိုတောငျ သငျ့ရဲ့ခံစားခကျြအမှနျကိုမပွောလိုကျရပဲဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။သူငယျခငျြးတှရှေမှေ့ာ သငျ့အမကေိုခဈြတယျပွောဖို့လညျးမရှကျပါနဲ့။အမကေိုခဈြတယျဆိုတာ နှုတျကပွောစရာမလိုတဲ့အမှနျတရားဆိုပမေဲ့လညျး ပွောပါ။သငျ့ဘကျက သူတို့အပျေါခဈြကွောငျးဖျောပွနိုငျသလောကျဖျောပွပါ။
ဒီလိုပဲ အဖအေ့ပျေါ၊သူငယျခငျြးတှအေပျေါ၊ခဈြသူအပျေါ ခဈြတယျဆိုတာစိတျထဲကသိပမေဲ့လညျး ခဈြကွောငျးပွောပါ။ကိုယျခဈြတဲ့သူကိုခဈြတယျလို့ပွောရတာလောကျ ပြျောစရာကောငျးပွီးကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့အခြိနျဆိုတာမရှိပါဘူး။
သငျ့ရဲ့ မသိစိတျကို ယုံကွညျမှုမရှိတာကလညျး သငျကိုယျတိုငျမသိတဲ့အမှားတဈခုပါပဲ။တဈခါတဈလေ ကိုယျ့စိတျထဲက ဒီလိုလုပျလိုကျရငျပိုကောငျးမယျလို့ထငျတယျ။ဒါပမေဲ့ တဈခြို့တဈခြို့သောအကွောငျးအရာတှကွေောငျ့ မလုပျဖွဈလိုကျဘူး။တကယျတမျးလုပျဖွဈလိုကျတဲ့အရာက ကိုယျ့စိတျထဲကစဉျးစားမိခဲ့တာလောကျမကောငျးဘူး။ကိုယျ့ရဲ့ မသိစိတျအပျေါအယုံအကွညျကငျးမဲ့တာကလညျး မလိုလားအပျတဲ့နောငျတတှဖွေဈစပေါတယျ။ကိုယျလုပျခငျြတဲ့အရာကိုလုပျလိုကျမိလို့ဖွဈလာတဲ့အကြိုးဆကျတှကေ ကိုယျ့အတှကျ သငျခနျးစာတဈခုပါပဲ။လုပျခငျြရဲ့သားနဲ့ မလုပျလိုကျမိတဲ့နောငျတတှရေမှာထကျစာရငျ သငျခနျးစာတဈခုရတော့ပိုမကောငျးဘူးလား။
သငျ့ဘဝကို သငျကိုယျတိုငျဖကျြဆီးနတေဲ့ဒီအရာလေးတှကေို သိပွီဆိုရငျ သငျ့ကိုယျ့သငျ ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ ပွောငျးလဲသငျ့တာတှပွေောငျးလဲပွီး ရှဆေ့ကျလြှောကျပါတော့…
စကော့တလန်ဘုရင်မ Mary အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ” Mary Queen of Scots ”